Ndakamusejusa ndokumudzidzisa kuti mukadzi anosvirwa sei – VanodaZvinhu
Akatora chombo chake chaive chamira kunge danda. Raive rino raive rine midzira yakati tande tande. Rakasvipa kuti ndoo. Yaive yakachecheudzwa. Musoro wayo waive mutsvuku but wakasviparara semunhu airatidza kuti aive ave nemakore achecheudzwa. Yaive yakabhenda kunge banana. Ndakazonzwa musoro wayo wotsvaga nzira yekwazvakarehwa. Yakavhura matinji angu yopinda zvayo zvinyoronyoro. Ndakaita kunge munhu abatwa nemagetsi.
Akaramba achiipfekedzera akaibata neruoko kusvika yapinda yose. Apa yaitsvedzerera nekunyerekedza madziro ebeche zvokuti ndainzwa kakunakirwa. Akaizvomora ndokuidzoserazve. Ndokuchitanga kuita zvine kaspeed nerythm. Maoko ake aive akabata mazamu angu achindiita nekumashure. Aiti akatambisa tambisa chiuno, oizamurira mukati kati. Akaroverera kuleft kaviri katatu oroverera kuright kaviri katatu ozamurira nechepakati kashanu kana katanhatu. Aiita serovambira yadya mbanje. Inodzingirira munhu kusvika yave mugotsi yomira zvayo. Kana ave kure yodzingirirazve yosvika mugotsi yomira.
i am a 30 yr old single and smart guy. I am looking for a younglady 18 and old who want a serious relationship leading up to marriage ngaandibate pa +27619517756 am in Cape town
Next story Kusvira kwandakaita mainini munin’ina webabe ndisati ndaroora